HTC dia hanolotra ny HTC U miaraka amin'ny Snapdragon 835 amin'ny 16 Mey | Vaovao momba ny gadget
Na eo aza ny zava-drehetra nanjo an'i HTC, manohy ny vaovao amin'ny fampisehoana ataon'ny orinasa taizaanianina izahay ary amin'ity indray mitoraka ity dia ofisialy ny daty fanolorana ny HTC U vaovao. asehoy amin'ny fomba ofisialy ny fitaovana amin'ny 16 Mey any Taipei. Amin'ity tranga ity, izay ananantsika eo ambony latabatra dia ny fanasana amin'ny media amin'ny hetsika sy ny isan'ny tsaho miresaka momba ny famaritana ny fitaovana toy ny processeur Qualcomm Snapdragon 835, ny RAM 4 na 6 GB na ilay vaovao kitapo. ary programmable antsoina hoe Edge Sense.
Ho an'ireo rehetra izay tsy mahalala izay tondroin'ny HTC amin'ity rafitra Edge Sense ity, azontsika atao ny milaza fa izy io dia famoahana efa niantona tamin'ny HTC U vaovao efa ela. mamela ny fitaovana hanana fefy hikasika ahafahantsika manamboatra fihetsika sasany hanatanteraka asa amin'ny fitaovana. Na izany na tsy izany dia ho hitantsika tsy ho ela izany rehefa aseho eo antenatenan'ny volana manaraka ny fitaovana.
Ireo dia ny sasany amin'ireo famaritana ny HTC U vaovao izay haseho amin'ny 16 Mey:
5,5 efijery Super LCD misy refy QHD
RAM 4 sy 6GB
64 sy 128GB ho an'ny fitadidiana anatiny
Fakan-tsary 12 MP aoriana ary fakan-tsary 16 MP eo aloha
Quick Charge 4.0, fifandraisana LTE, WiFi tarika roa, Bluetooth, mpamaky rantsantanana ary NFC
Ny fahafahan'ny Taiwanese miatrika ny marika sisa efa napetraka ankehitriny toy ny Samsung, Apple, Huawei na LG ankoatry ny hafa, dia ny fahatratrarany ny fifandanjana tanteraka eo anelanelan'ny zava-baovao mahaliana ao amin'ny fitaovany sy ny vidiny, satria ity farany mahabe misafidy fitaovana hafa ny mpampiasa. Amin'ity tranga ity, dia manantena isika fa ny fanavaozana an'ity Edge Sense ity raha toa ka hampiharina dia hahatonga ny marika hiverina hitsingevana avy ao amin'ilay lavaka nijanonany nandritra ny fotoana kelikely.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » HTC hampiditra ny HTC U misy azy amin'ny Snapdragon 835 amin'ny 16 Mey